Kooxdayada - SmartMe
Dom » Kooxdayada
Nadiifiyaha guud. Waxay dhistaa liisaska hawsha, jadwalka dhacdooyinka waxayna isku dubaridaa shaqada kooxda tifaftirka oo dhan, waxay kaloo wadahadalo la yeertaa soo saareyaasha. Madzia sidoo kale waxay mas'uul ka tahay dhamaan filimada aad ka daawan karto kanaalkeena! Wuu jecel yahay waana edbiyaa 🙂 Miyaad sidoo kale jeceshahay sawiradeena Instagram iyo Pinterest? Iyaduna waa iyada. Wuxuu jecel yahay marka wax walba la abaabulo, taas oo si weyn nooga caawinaysa inaan ka gudubno fowdada caqliga leh. Socdaal jecel iyo taageere heerkulkiisu ka sareeyo 30 digrii. Kooxda dhedig!
Ilaa hadda qofka ugu wanaagsan ee waalan ee SmartMe. Wuxuu fahamsan yahay oo jecel yahay baraha bulshada, sidoo kale wuxuu awood u leeyahay inuu si fiican ugu dhex socdo. Wuxuu kormeerayaa Instagram iyo Pinterest. Thanks iyada, waxaad ka arki kartaa sida tiknoolajiyada quruxda badan u noqon karto iyo sida shaqadeenu uga eg tahay jikada. La'aantood, SmartMe ma noqon lahayn mid midab badan. Intaa waxaa dheer, wuxuu u sameeyaa subtitles fiidiyowyadayada YouTube-ka wuxuuna qoraa wararka. Orchestra dumar ah!
Waxaa lagu qurxiyay teknoolojiyad cusub, oo fikradahooda si fudud aan waligood dhammaan! Wuxuu si joogto ah u ogaadaa qalab cusub oo la tijaabinayo, wuxuu qaabeeyaa xalal caqli badan asagaana dhisa. Nin orkiste ah oo isna sifiican u dheel! PS Wuxuu daahfuray sida loola xiriiro saacadda alaarmiga ee Shiinaha, marka ixtiraam 😉
Khabiir Boolish ah oo nolosheena badbaadiya! Majiro qoraal lagaa qarin karo, weedh kasta oo websaydhkuna waa inay ku dhaaftaa tijaabooyinkeeda adag. Wuxuu jecel yahay inuu safro oo uu buuraha dhex lugeeyo.
Waxay yiraahdaan Daanyeel wuxuu ku bilaabay tacaburtiisa teknoolojiyad cusub oo ku jirta sariirta guurka oo ay umuuqato inay wax ku jiraan. Ilaa 16:00 galabnimo barnaamijiye la ixtiraamo, oo uu ku xigto tifaftire, naxariis laawe u ah wax kasta oo caqli iska dhiga. Waxay jeceshahay safarro waaweyn iyo kuwo yaryar.
Caqliga guud. Szymon ayaa mas'uul ka ah dhammaan dhabarka shabakadaha. Markay shey shaqeyn weydo wuu garanayaa sababta waana hagaajin karaa! Wuxuu hubiyaa in websaydhku ammaan yahay, dhakhso badan yahay oo had iyo jeer kaa yaabiso alaabooyinka cusub. Wuxuu kaqeybqaataa orodka iyo ciyaaraha guddiga. Wuxuu jecel yahay inuu helo xasillooni maskaxeed.
Qofka wanaagsan ee qarinaya wax ka badan hal sir bia Wuxuu jecel yahay Google Home iyo wax kasta oo ku xirnaan kara. Kama baqayo inuu muujiyo ra’yigiisa. Hadafkeedu waa in la qaabeeyo guri caqli badan si uusan u muuqan. Waxaan ku faraxsanahay inaan dib u eego alaabada Smart Home iyo kamaradaha labadaba, tusaale kamaradaha baabuurta.
Suxufiga xiisaha iyo xirfadda, tifaftiraha xiisaha. Paweł wuxuu tifaftire ka ahaa sanado, taariikhduna waxay ahayd dareenkiisa ilaa yaraantiisii. Aragtidiisa saxda ah laakiin qosolka leh ee xaqiiqda ayaa si aad u fudud loogu wareejiyay qaabka tiirarka. Farsamo ahaan, laakiin kaliya maahan, Paweł wuxuu fikradihiisa kula wadaagi doonaa SmartMe Axad walba.
Smart Mama 😉 Waa hooyo leh seddex cunug. Wuu ku qanacsan yahay waqtiga uu la qaatay qoyskiisa, waana sababta uu markasta u raadinayo aalado casri ah oo nolosha u sahlaya. Waxay tijaabisay boqolaal qalab si ay u doorato kuwa ugu fiican. At SmartMe, wuxuu ku farxi doonaa inuu caawiyo waalidiinta da'da yar iyo kuwa yar yar! Marka lagu daro waqtiga uu la qaatay carruurta iyo SmartMe, wuxuu u shaqeeyaa sidii dhakhtar cilmi nafsi clinical
Soo helitaankii weynaa ee SmartMe. Wuxuu qoraa ereyo wanaagsan mar walbana wuxuu ku garaacaa cidiyaha madaxa. Wuxuu ku qiimeyn karaa aaladaha casriga ah xagal gebi ahaanba ka duwan oo wuxuu leeyahay aragti cusub oo wax walba ah. Waxaad markasta kaheli doontaa warkeeda mid xiiso leh waxaanan kuu balan qaadeynaa inaad ku aqrin doontid iyaga oo faraxsan! Taasina waa bilow. Imisa jeer oo kale ayay inala yaabi doontaa? Ma sugi karno nafteena!
Elektaroniga dhiigiisa ayuu ku jiraa! Isagu waa tifaftire iyo naqshadeeye SmartMe oo ka shaqeeya aagga Kaaliyaha Guriga. Wuxuu had iyo jeer jecel yahay inuu isagu isagu xalliyo oo uu horumariyo hamigiisa guri caqli badan. Wuxuu jecelyahay inuu sawiro iskaqaado waqtiga firaaqada ah waana jecel nahay inaan soo dhigno 🙂
Faras madow SmartMe. Ania waxay abuurtay SmartMe. Waxay dhistay waxaad ku aragto websaydhka, sidaa darteed naqshadeynta garaafka, naqshadeynta - wax kasta oo laga soo qaado astaanta illaa farta. Sida Czaki oo kale, wuxuu jecel yahay inuu kolba mid u fuulo buuraha. Ania sidoo kale waxay sameysaa jalaato dhalaalaysa - waxaan si gaar ah ugula talinaynaa cookies!
Inteena ugu badan dhiig ayaa ku jira xididdada, laakiin waxaa jira qaar koronto ku shaqeeya. Taasi waa waxa Rummy ku saabsan yahay. Aabe ku dayasho mudan maalintii, laakiin isla marka qorraxdu dhacdo, wuxuu la soo baxayaa qalabka Fibaro oo fiiriyaa waxa kale ee lagu qaban karo! Naqshadeeye iyo tifaftiraha SmartMe
Maalin kormeer la ixtiraamo, habeenkiina nin buuraha jira. SmartMe, wuxuu mas'uul ka yahay dib u eegista Foto / Video / Audio wuxuuna si wada jir ah u abuuraa fiidiyowyo iyo sawirro aad ku arki doontaan astaanteena. Wuxuu ku kasbaday sawir qaadistiisa iyo xirfaddiisa filimada meelaha buuraha Andes, Tatra Mountains iyo wax kasta oo kale oo uguyaraan 4 mitir dheer. Wuxuu jecel yahay Skoda (horeyba wuxuu u lahaa laba, mitirkuna wali wuu garaacayaa).
Dunidaada oo dhan - Smart
Noo soo qor, waan ku farxi doonnaa inaan ku caawinno!